Ahmed Madoobe oo ka hadlay waxa hor taagan Furitaanka Shirka Muqdisho | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ahmed Madoobe oo ka hadlay waxa hor taagan Furitaanka Shirka Muqdisho
Ahmed Madoobe oo ka hadlay waxa hor taagan Furitaanka Shirka Muqdisho
Waxaan wali si rasmi ah u furmin shirkii la filayay in magaalada Muqdisho ku yeeshaan Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in ay la xumaatay in isaga iyo Madaxweyne Deni la shiraan Madaxweynaha Soomaaliya, waxa uuna xusay in suurto gal tahay in maamulada kale kahor yimaadaan waxii ay ku heshiiyaan sadexdooda maadaama hal beel kasoo wada jeedaan.
“Waxaan idhi hadii shalay Dhuusamareeb shirkii ahaa diidmadu ay ahayd niman baa ka maqan, in aan hadana anaga oo saddex ah intaan shirno hadhow aad na xamataan oo tidhaahdaan aryaa day saddexdii qoyska ahayd baa hada wax shiraysee, masiirka iyaga maa ka talinaaya. Warkaasi war kale waaye, taas inaan shir intaan galno saddexdayadu komunikee soo saarro nooca doorashada ka soo hadallo, warqad kale aan soo saarraa waxay macno tiraysaa nooca shirku yahay iyo imaatinkayagii iyo waxaba”. ayuu yiri Axmed Madoobe.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sheegay in wadatashi kadib isla garteen in shirka la balaariyo loona yeero si ay qeyb uga noqdaan maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira.
“Waxaan isla qaadanay markaa in aanay sax ahayne, madaxweynoow waan joogaynaa xamar waa la yimid saaxiibadano ha loo yeedho, hadaan wax kala tabanayno aan wadahadallo labada aqal ha la isu keeno” ayuu yiri Axmed Madoobe.
Hadalkan kasoo yeeray Axmed Madoobe ayaa meesha ka saaraya shirkii magaalada Muqdisho oo markii hore qorshihiisu ahaa kaliya in ay shiraan Madaxweynaha Soomaaliya iyo Madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland oo horey u diiday shirkii Dhuusomareeb.
Previous articleCiidama Beeleydyo ku diriray Gobolka Galgaduud oo la kala qaaday
Next articleCiidamada Kenya oo Diyaariyey Qorsha Cusub ay kaga Hortageyaan weerarada Alshabaab
Ciidamada ammaanka magaalada Cadaado oo gacanta ku dhigay caruur laga...
Somaliland on the verge of international recognition